Khadka toosan ee LFC300 3 Wajiga AC Power Source-Linear AC Power Source-AC Power Source|Adeegga Korontada Dc|Xakamaynta Volta - SophPower
Hoyga>Alaabta>Ilaha Quwada AC>Khadka Tooska ah ee Awoodda AC
LFC300 Series Linear AC Power Source waxaa lagu dhex daray wareegga tooska ee balaadhinta tooska ah si loo hubiyo buuqa aadka u hooseeya iyo xasilloonida. Isticmaalayaasha waxay si fudud u horumarin karaan barnaamijyo si loo fududeeyo kala duwanaansho gaar ahaan isgaarsiinta isku xirka, qalab maqal iyo muuqaal ah. Ilaha tamarta toosan waxay siisaa awood nadiif ah THD lessthan 0.3% at 50 / 60Hz oo waxay bixisaa kala duwan oo danab wax soo saarka ballaaran 3 wejiga0-520V(Fiican.1040V); inta udhaxeysa jaangooyooyinka 45-400Hz(Dooro. 300-800Hz) hagaajin karo, go'an 50 / 60Hz.
l Waxqabadka jawaab celinta korantada fog si loo hubiyo in danabku uu waafaqsan yahay heerka dejinta.
l Inrush hadda ilaa 5 jeer(3 jeer at 3 wajiga) ee xilligan ugu sarreeya, jidaynayey isticmaalayaasha si ay u dhaqaajiyaan xamuulka hadda xamuul sare(yacni. matoorka, kombaresarada iyo wixii la mid ah).
l Awood u leh inuu muujiyo korantada wejiga qayb kasta si madax-bannaan.
l Isku hagaajinta waqtiga dhabta ah ee danab& soo noqnoqoshada isla markiiba si loo badbaadiyo waqtiga loo baahan yahay imtixaanka.
l Qufulka furaha toobiye, ka hortagaya in xogta wax laga beddelo diidmo darrada awgeed.
l Ama guddi hore ama RS-232 fog /485 xakamaynta ayaa la heli karaa.
l Sax sax-RMS mitir ee volts, amps iyo awood ama quwadda quwadda ee bandhigyada iyo warbixinnada.
l TALLAABADA iyo shaqada RAMP: ku habboon danab iyo tijaabooyin kala duwanaansho soo noqnoqda oo si wax ku ool ah u yareeya qulqulka qulqulka inta lagu jiro bilowga mootada.
MUUQAAL LFC-303 LFC-306 LFC-309 LFC-315 LFC-320 LFC-330 LFC-345
marxaladaha 3W4W + Dhul
danab 208, 220, 240 (3W+G), 380, 415, 480V (4W+G) ± 10%
Joogtaynta 50/60Hz ± 5%
qiimeeyo Awood(KVA) 3 6 9 15 20 30 45
Ugu badnaan hadda Jira 150V Range(A) 8.4 16.8 25.2 42 54 84 126
danab Khad si ay u Dhexdhexaad(V) 0 - 150 V / 0 - 300 V La dooran karo(dooro&nbspV0-600V)
Line si ay u&Khad;Line(V) 0 - 260 V / 0 - 520 V La dooran karo(dooro 0V1040V)
Joogtaynta Range 50/60Hz, 45-65Hz hagaajin karo(dooro. 45-400Hz)
Cabirka hadda Jira(RMS) Qaraarka: 1mA / 10mA ama 10mA / 100mA Gawaarida Range
Sax ah: 0.4% ± 0.3% F.S. ± 3 Xisaabinta ± 0.1% / 100Hz
danab(RMS) Qaraarka: 0.1V
Sax ah: 0.2% ± 0.3% F.S. ± 2 Xisaabinta ± 0.1% / 100Hz
Joogtaynta Qaraarka: 0.01Hz / 0.1Hz Gawaarida Range
Sax ah: ± 0.1% ± 2 Xisaabinta ± 0.05% / 100Hz
Wadarta Harmonic ah Dhalanrog(THD) ‰ ¤ 0.3% (Diidan Xamuul )
danab Xeer ‰ ¤ 0.5%
Xamuul Xeer ‰ ¤ 0.5%
Joogtaynta Xeer ‰ ¤ 0.01%
Crest Isir ‰ ¥ 3
Ilaalinta Over hadda Jira, Gaaban Wareeg, Over Heerkulka�In ka badanr Xamuul ,Wejiga Yaraanta, Danab hooseeya Ilaalinta, Alaarmiga
Karti ‰ ¥ 75% ( at buuxa rar )
Hawlgalka Heerkulka 0° - 40° C / 32° - 104. ° F
Qaraabo Huurka 10-90%,aan isku ururin
TUSMO IYO KONTOROOLKA
4 God LED Mitir danab, hadda Jira, Joogtaynta,Power ama&nbspAwoodr isir(Ikhtiyaar)
Isdhaxgalka RS-232 heerka(dooro RS-485)
Cabirka(W * H * D)(mm) 600*470*430 700*570*480 700*1510*565
Miisaanno(Kg) 150 180 210 270 320 410 520